အာရှပစိဖိတ် ကျွန်ပြုခံရမှုအများဆုံး ၁၀ နိုင်ငံတွင် မြန်မာ ပါဝင် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
စစ်သားတွေက သူများထက်ထူးပြီး ဘာကြောင့် အပိုအခွင့်အရေးတွေ ယူနေတာလဲ »
အာရှပစိဖိတ် ကျွန်ပြုခံရမှုအများဆုံး ၁၀ နိုင်ငံတွင် မြန်မာ ပါဝင်
M-Media April 16 . 2015·
– ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျွန်ပြုခံရမှုတွေကို စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ Global Slavery Index က အာရှပစိဖိတ် နိုင်ငံတွေမှာ ခေတ်သစ် ကျွန်ပြုခံရမှုအခြေအနေကို စာရင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့နဲ့အတူ ကျွန်ပြုခံရမှုအများဆုံး ထိပ်ဆုံး ၁၀ နိုင်ငံမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ခေတ်သစ် ကျွန်ပြုခံရမှုမှာ ပုံစံမျိုးစုံရှိပြီး အတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခံရတာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်ဖို့အတွက် လူကုန်ကူးခံရတာ၊ အတင်းအဓမ္မလက်ထပ်ခံရတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခေတ်သစ် ကျွန်ပြုခံရမှု အရေအတွက်ဟာ ၂၃၁၆၀၀ လောက်ရှိတယ်လို့ Global Slavery Index က ဆိုပါတယ်။ ဒီပမာဏဟာ နိုင်ငံ လူဦးရေရဲ့ ၀.၄၃၄၈ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ဖြစ်ပါတယ်။
အာရှပစိဖိတ် ဒေသတစ်ဝှမ်း အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်လို နိုင်ငံမျိုးမှာ မိသားစုလိုက် ကျွန်ပြုခံရတာတွေရှိနေပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အုတ်ထုပ်လုပ်ရေး၊ အထည်စက်ရုံနဲ့ ကုန်ထုတ်စက်ရုံတွေမှာ အတင်းအဓမ္မ ခိုင်းစေခြင်း ခံနေရပါတယ်။
ဒီလိုကျွန်ပြုခံရမှုတွေကို အစိုးရရဲ့ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံက CCC အဆင့်နဲ့ အဆင့် ၁၈ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ အစိုးရရဲ့ တုန့်ပြန်မှုစာရင်းမှာ ကျွန်ပြုခံရသူတွေလက်က လွတ်မြောက်လာသူတွေကို အစိုးရက ထောက်ပံ့ပေးမှု၊ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တရားစွဲဆိုမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ တာဝန်ခံမှု စတာတွေကို ထည့်သွင်း တွက်ချက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး အာရှပစိဖိတ်နိုင်ငံတွေရဲ့ အားနည်းချက်တွေကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ကျွန်ပြုမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပေါ်လစီမှာ ၆၈.၂၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမှာ ၉၁.၈၊ နိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုမှာ ၆၁.၈၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမှာ ၆၄.၆၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ ၇၁.၈ အသီးသီးရရှိပြီး အားနည်မှုအများဆုံး ထိပ်ဆုံး ၃ နိုင်ငံမှာ မြောက်ကိုရီးယား၊ အာဖဂန်တို့နဲ့အတူ ရှိနေပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကျွန်ပြုခံရမှု အရေအတွက် စုစုပေါင်းရဲ့ ၆၅.၈ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အာရှပစိဖိတ်ဒေသတစ်ဝှမ်းမှာ ရှိနေတာဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၃၅.၈ သန်းလောက်ဟာ ခေတ်သစ် ကျွန်ပြုခံရမှုအောက်မှာ နေထိုင်နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ပြီး ကလေးငယ်တွေကို မွေးစားဖို့အတွက် ရောင်းတာ၊ အတင်းအဓမ္မ လက်ထပ်ဖို့အတွက် လူကုန်ကူးတာတွေဟာ အာရှပစိဖိတ်ဒေသ တစ်ဝှမ်းမှာ တိုးလာနေပါတယ်။
အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှာရှိတဲ့ ကျွန်ပြုခံရသူအရေအတွက် စုစုပေါင်းဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကျွန်ပြုခံရမှု အရေအတွက်ရဲ့ ၅
၀ ရာခှိုန်နှုန်း ရှိနေပါတယ်။
This entry was posted on April 18, 2015 at 12:03 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.